बाइबलका कथाहरू: परमेश्वरको साथी अब्राहाम - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
जलप्रलयपछि मान्छे बस्न गएको एउटा ठाउँको नाउँ ऊर थियो। ऊर राम्रा-राम्रा घर भएको ठूलो सहर थियो। तर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू झूटा देवताहरूको पूजा गर्थे। बाबेलमा हुँदा पनि उनीहरू त्यसै गर्थे। ऊर र बाबेलका मान्छेहरू यहोवाको सेवा गरिरहने नूह र उसको छोरो शेमजस्तो असल थिएनन्।
जलप्रलय भएको ३५० वर्ष बितेपछि नूहको मृत्यु भयो। यसको दुई वर्षपछि एक जना असल मान्छेको जन्म भयो। उसको नाउँ अब्राहाम थियो। अब्राहाम कस्तो देखिन्थ्यो चित्रमा हेर। अब्राहाम आफ्नो परिवारसित ऊर सहरमा बस्थ्यो। परमेश्वरलाई अब्राहाम धेरै मन पर्थ्यो।
एकदिन यहोवाले अब्राहामलाई यसो भन्नुभयो: ‘ऊर र तेरा नातेदारहरूलाई छाडेर मैले देखाउने देशमा जा।’ के अब्राहामले परमेश्वरको आज्ञा मान्दै ऊरका सबै सुखसुविधा छोड्यो? हो, छोड्यो। अब्राहामले सधैं परमेश्वरको आज्ञा मानेकोले ऊ परमेश्वरको साथी भयो।
अब्राहामले ऊर छोड्दा उसको परिवारका केही सदस्यहरू पनि सँगै गए। अब्राहामको बुबा तेरह, भतिजा लूत अनि अब्राहामकी पत्नी सारा पनि सँगै गए। केही समयपछि उनीहरू सबै हारान भन्ने ठाउँमा पुगे। तर त्यहाँ पुगेपछि तेरहको मृत्यु भयो। यो ठाउँ ऊरदेखि टाढा थियो।
केही समयपछि अब्राहाम र उसको परिवार हारानबाट कनान भन्ने देशमा गयो। त्यहाँ पुगेपछि यहोवाले यसो भन्नुभयो: ‘म यो देश तेरा छोराछोरीलाई दिनेछु।’ अब्राहाम कनानमै बस्यो। ऊ त्यहाँ पालमा बस्थ्यो।
परमेश्वरले अब्राहामलाई धेरै मदत गर्नुभयो। उसित भेडा अनि अरू थुप्रै जनावर भयो। अब्राहामको धेरै नोकरचाकर पनि थियो। तर अब्राहाम र साराको छोराछोरीचाहिं थिएन।
अब्राहाम ९९ वर्ष पुगेपछि यहोवाले उसलाई यसो भन्नुभयो: ‘तँ थुप्रै जातिको बुबा हुनेछस्।’ तर यो कसरी हुन सक्थ्यो र? किनकि अब्राहाम र सारा त असाध्यै बूढाबूढी भइसकेकोले बच्चा पाउनै सक्दैनथे।
उत्पत्ति ११:२७-३२; १२:१-७; १७:१-८, १५-१७; १८:९-१९.
ऊर सहरमा कस्ता मान्छेहरू बस्थे?
चित्रमा देखाइएको मान्छे को हो? उसको जन्म कहिले भएको थियो र ऊ कहाँ बस्थ्यो?
परमेश्वरले अब्राहामलाई के भन्नुभयो?
अब्राहाम किन परमेश्वरको साथी भयो?
अब्राहामले ऊर छोड्दा ऊसित को-को गए?
अब्राहाम कनान देशमा पुगेपछि परमेश्वरले उसलाई के भन्नुभयो?
अब्राहाम ९९ वर्ष पुगेपछि परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो?
उत्पत्ति ११:२७-३२ पढ्नुहोस्।
अब्राहाम र लूतबीच के साइनो पर्थ्यो? (उत्प. ११:२७)
आफ्नो परिवारलाई कनानमा सार्ने श्रेय तेरहलाई दिइएको भए तापनि वास्तवमा अब्राहामले नै कनान सर्ने पहल गरेका थिए भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौं अनि उसले किन यसो गऱ्यो? (उत्प. ११:३१; प्रेरि. ७:२-४)
उत्पत्ति १२:१-७ पढ्नुहोस्।
अब्राहाम कनान देशमा पुगिसकेपछि यहोवाले अब्राहामसित बाँध्नुभएको करारको कुन थप पक्ष प्रकट गर्नुभयो? (उत्प. १२:७)
उत्पत्ति १७:१-८, १५-१७ पढ्नुहोस्।
अब्राम ९९ वर्षको हुँदा उसलाई के नाउँ दिइयो र किन? (उत्प. १७:५)
यहोवाले सारालाई भविष्यमा के आशिष् दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो? (उत्प. १७:१५, १६)
उत्पत्ति १८:९-१९ पढ्नुहोस्।
उत्पत्ति १८:१९ मा बुबाहरूले पूरा गर्नुपर्ने कुन जिम्मेवारी प्रस्ट पारिएको छ? (व्यव. ६:६, ७; एफि. ६:४)
यहोवाको नजरबाट कुनै पनि कुरा लुकाउन सकिंदैन भनी साराको कुन अनुभवले देखाउँछ? (उत्प. १८:१२, १५; भज. ४४:२१)